Home News Dagaal Beeleedyo Ka Soo Cusboonaaday Deegaano Hoostaga Gobolka Sool
Dagaal Beeleedyo Ka Soo Cusboonaaday Deegaano Hoostaga Gobolka Sool
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya gobolka Sool, dagaal u dhaxeeyay laba beelood ayaa ka dhacay degaan hoostaga gobolkaasi oo lagu magacaabo Dhumaay.
Dagaalkan dhexmaray labadan beelood ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii xalay dad lagu dilay degaanka, sidaasina ay ku bilaabatay xiisad dhinacyadan u dhaxeysa, intaasi kadibna ay sababtay inay dagaalamaan.
Waxaa la soo sheegayaa in dagaalkan uu geystay khasaare kala duwan oo labada dhinac ah, maadaama dagaalka la isku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan, islamarkaana muddo saacad iyo wax ka badan uu socday dagaalka.
Waxaa socda dadaalo ay wadaan odayaasha dhaqanka ee labada beelood, kuwaasi oo lagu doonayo in lagu dhameeyo colaada ka dhaxeysa dhinacyadan.
Xukuumadda Somaliland ayaa marar badan ku cel celisay inay wax badan ka qaban doonto dagaal beeleedyada ku soo laa laabtay degaankan, balse ilaa hadda ma aanay qaadin talaabooyin wax looga qabanayo colaada.
Previous articleWasiir Wuxigeenkii Hore Maaliyada Puntland Oo Maanta Loo Doortay Inuu Noqdo Duqa Magaalada Boosaaso
Next articleMusuqa ka jira gobolka Banadir iyo boobka hantida qaranka oo lugaha la gashay Xafiiska RW Kheyre iyo eheladiisa (Cadeyno)
AFRICOM: U.S. Forces ‘Commuting to Work’ to Curb Rising Terror Threat...
Odayaasha Dhaqanka K/Galbeed oo sheegay in ay is-taagayaan Doorashada Maamulkaasi!!